Ary izy mazoto mankany amin’i “maman Cherie” any mihitsy an ! Tongava soa koa dia mampamangy e ! Na izany aza, mba afeno ihany ilay maha zanak’i mama anareo fa aza dia hararaotina loatra ity fahanginanay ity a ! Sa dia efa tena heverinao ho resy tanteraka mihitsy izahay tsy miteny intsony io ? Fombanay ihany izao rehefa reraka. Ilaina koa ny maka aina indraindray. Fa dia inona loatra mihitsy no tena tsy mahatamana anao eto sy mahafatifaty anao any amin’ny olona nalaza ho mpanandevo antsika taloha any e ? Fa angaha moa tsy izahay indray ilay ankohonanao mila fanavotana ?